VLC bụ a free transcoder na a multimedia ọkpụkpọ na nwere ike ibudata site Videolan.org. Ọ bụ a na kọmputa music ọkpụkpọ na-akwado akwado ọtụtụ faịlụ formats gụnyere M2TS na MTS jikọrọ AVCHD footage. Advanced Video Codec High Definition abbreviated dị ka AVCHD, bụ ụdị nke faịlụ Ọkpụkpọ na e mepụtara site Panasonic na Sony. Ya mere, ndị camcorders ma ọ bụ HD ese foto si arụpụtara site ụlọ ọrụ ndị na-emepụta vidiyo na AVCHD usoro. Ya mere, ndị videos mkpa ka a converted ọzọ formats na-akwado site na ọtụtụ ngwaọrụ. Nkịtị ọkọlọtọ formats na windows-akwado ndị WMV na AVI. Ị nwere ike iji VLC iji tọghata AVCHD faịlụ n'ime ọ bụla usoro-akwado site na VLC.
Ndị na-esonụ bụ Uru nke na-eji VLC Ntụgharị:
Na-akwado a dịgasị iche iche nke video na ọdịyo formats
Ezi Ntụgharị na hotkey nkwado
Mfe iji interface na atụmatụ
Nnọọ fechaa na mgbanwe
Nwere ike ike na gụgharia ọwa na weebụ
Ejije BluRay na HD
Olee otú igwu egwu AVCHD Videos na VLC
Nzọụkwụ 1: download VLC software si Videolan.org. Wụnye ebudatara faịlụ n'ime kọmputa gị na ẹkedori software mgbe echichi zuru ezu.
Nzọụkwụ 2: Iji a igwefoto USB, jikọọ gị camcorder ma ọ bụ AVCHD igwefoto na kọmputa gị. Tụgharịa na gị igwefoto na ka ọ dị na ya 'playback mode. Chere maka Windows Explorer ịchọpụta ngwaọrụ gị. Mgbe gị igwefoto achọpụtara, gaa na "My Computer" ngalaba na-emeghe igwefoto site abụọ na ịpị ngwaọrụ akara ngosi. Emi odude na AVCHD faịlụ na ị chọrọ igwu na ịdọrọ na dobe ya n'ime desktọpụ kọmputa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ kpọmkwem nchekwa nke gị nhọrọ. Alternatively, ị nwere ike pịa na 'media' button n'elu n'akụkụ aka ekpe nke VLC interface wee pịa 'emeghe faịlụ' button. Mgbe ahụ, ị nwere ike ịga kpọmkwem ka AVCHD faịlụ na ọnọdụ na họrọ faịlụ wee pịa 'oghe.'
Nzọụkwụ 3: Nzọụkwụ 3: Your AVCHD Files ga-akpaghị aka na-amalite na-egwu mgbe ịpị na 'oghe' bọtịnụ.
Olee otú iji tọghata AVCHD Videos na VLC
Nzọụkwụ 1: Pịa taabụ aha ya bụ "Media" emi odude ke n'elu nke VLC Media chị interface. Họrọ nhọrọ "Save / tọghata." Gaba n'elu n'akụkụ aka ekpe nke VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na pịa "File" taabụ.
Nzọụkwụ 2: Pịa "Tinye" button hụrụ na n'akụkụ aka nri nke VLC Media Player interface ka ịnweta search ihuenyo gbapụta ngalaba na-egosi na ọdịnaya nke ike mbanye. Họrọ akara ngosi na-egosi gị chọrọ AVCHD faịlụ na pịa na "Open" button Ibu Ibu gị chọrọ AVCHD faịlụ na Open Media window. Pịa "Save / tọghata" bọtịnụ dị na ala-nri akuku nke VLC interface ka ịnweta tọghata window.
Nzọụkwụ 3: pịa adaala igbe aha ya bụ "Profaịlụ" ma họrọ a VLC preset mmepụta nke gị nhọrọ. E nwere ọtụtụ nhọrọ na-agụnye MPEG-2, WMV, MPEG-4, ASF na ọtụtụ ndị ọzọ ọ bụla e na ha onwe ha ngbanwe ụdị.
Nzọụkwụ 4: Ị pụrụ ikpebi na-aga n'ime elu ọnọdụ na-agbanwe ụfọdụ ntọala n'ebe ahụ. Ị nwekwara ike ike gị profaịlụ jide gị mmepụta video. I nwere ike ime nke a site na ịpị spana icon emi odude ke n'akụkụ aka nri nke igbe aha ya bụ "Profaịlụ." Họrọ ihe dị Encapsulation Audio, video codec na Format. Ị pụrụ ime ka ọtụtụ elu ọnọdụ mgbe a na ogbo. Pịa "Save" button ịzọpụta mgbanwe nke i mere ka gị na faịlụ na ka ịlaghachi na tọghata ihuenyo.
Nzọụkwụ 5: Pịa "ịchọgharị" button dị na Destination ubi nke VLC Media ọkpụkpọ interface ịhọrọ a zọpụta kọmputa nchekwa maka gị converted faịlụ. Kpọgharia aha gị converted faịlụ. Jide n'aka na-etinye faịlụ ndọtị maka format na ị na mbụ rọputara. Pịa "Save" button ka ịlaghachi na tọghata window edere.
Nzọụkwụ 6: Pịa "Malite" bọtịnụ dị na ala-nri akuku nke VLC interface na-amalite mkparịta ụka usoro.
Otu Alternative Ntụgharị ka VLC
Ị nwere ike iji Wondershare Video Converter Ultimate iji tọghata AVCHD faịlụ kama iji VLC media ọkpụkpọ.
Wondershare Video Converter Ultimate-Enweta nkwanye n'elu VLC Ntụgharị. Ọ na atụmatụ dị ike video ngwaọrụ na ọ bụghị naanị na-egwu, edit na tọghata AVCHD faịlụ, ma-abịa na a zuru ezu video edezi ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na-akparaghị ókè aga-eme. Na Wondershare Video Converter Ultimate, ị nwere ike idezi, tọghata, download, hazie, welie kpọọ ma na-ekiri vidiyo na n'elu 150 formats. Wondershare Video Converter Ultimate N'adịghị VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ Ntụgharị-akwado ndị niile AVCHD faịlụ site na niile ese foto.
Ogbe Nchigharị ✓ ✗
Ebuli maka Portable Devices ✓ ✗
Ikuku Transferringv ✓ ✗
Nbudata Online Videos ✓ ✗
Ọkụ Videos ka DVD ✓ ✗
Video ebre ✓ ✓
Asụsụ English, Spanish, German, French, Chinese Trad, Italian, Japanese, Portuguese English, Japanese, Deutsch, na French, Germany
Olee otú iji tọghata AVCHD M2TS / MTS ka iTunes
Olee otú igwu egwu M2TS na Plex media nkesa
Atụgharị gị Photos ka Video na Photo ka Video Ntụgharị
Olee otú iji tọghata FLV ka WMV na Mac / Windows
> Resource> tọghata> Olee otú iji Play na tọghata AVCHD Files na VLC